အောင်လံမြို့ရှိ ဝါစိုက်ပျိုးရေး ခြံအတွင်း၌ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ ဖယ်ရှားပေးရမည် ဆိုသောေ? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့ရှိ ဝါစိုက်ပျိုးရေး ခြံအတွင်း၌ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ ဖယ်ရှားပေးရမည် ဆိုသောေ?
အောင်လံ၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့ စမ်းချောင်းရပ် အောင်မင်္ဂလာကွက်သစ်ဝါစိုက်ပျိုး ရေးခြံအတွင်း ကျူးကျော်နေထိုင် သူများဖယ်ရှားခံရသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
”ဒီနေရာက အရင်ကအမှိုက် တွေနဲ့ ကလေးသင်္ချိုင်းကုန်းပါ။ အဲဒါကို ရှင်းလင်းပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ဖယ်ရှားမခံရပါဘူး။ အခုမှ ဖယ်ရှားခံရတာပါ။ ကျွန်မတို့က ဒီဝါခြံက လုပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာ လုပ်ခဘယ်ဈေးပဲပေါက်ပေါက် အစိုးရလုပ်ခနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီနေရာက ဖယ်မ ပေးရင် တရားစွဲဆိုခံရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေကို အကူအညီတောင်းခံပါတယ်။ ကျွန်မတို့အခက်အခဲကို ကူညီဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်”ဟု နေထိုင်သူဒေသခံ မစံပယ်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဝါစိုက်ပျိုးရေးခြံအတွင်း ကျူးကျော်နေထိုင်သူများမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က စတင်နေထိုင်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၁၄ စုရှိကာ ဝါခြံမှ စိုက်ပျိုးထားသော ကျွန်းပင်ကြီးများကြားတွင် နေ အိမ်များဆောက်လုပ်၍ နေထိုင်နေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ဒီဝါခြံကို ခြံမန်နေဂျာတွေ အဆက်ဆက်က ခြံပတ်လည်ထောင့် တွေမှာ ကျွန်းပင်တွေစိုက်ခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျွန်းပင်တွေနဲ့ လှည်းလမ်းကြောင်းမှာ အလုပ်သမားတွေက ကျူးကျော်တဲတွေထိုး ပြီးနေထိုင်နေကြတာကို ဒီဝါခြံထဲမှာ အလုပ်တွေကို အရင်တုန်းက ခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက် ခြံမန်နေဂျာတွေ အဆက်ဆက်မဖယ်ရှားခဲ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ရုံးချုပ်နဲ့သရက်ခရိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ ဖယ်ရှားပေးဖို့စာထွက်ပြီး နေထိုင် သူတွေကို တွေ့ဆုံကာ လက်မှတ်ထိုးအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအ သိပေးစာတွေကို စမ်းချောင်းရပ် ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အသိပေး တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးကြိမ်တိတိအ သိပေးပြီးရင် ဥပဒေအရ တရားစွဲ ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနဝါသီးနှံမျိုးသန့်ခြံ(အောင် လံ)တာဝန်ခံ ဒေါ်ခင်မာစိုးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှားပေးရန် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ခြံတာ ဝန်ခံမှ စာများထုတ်ကာ ကျူးကျော် နေထိုင်သူများကို ပထမအကြိမ် အသိပေးထားပြီဖြစ်ကာ တတိယအကြိမ် အသိပေးပြီးပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကာ နေထိုင်သူများမှာ ပြောင်းရွှေ့နေ ထိုင်ရေးအခက်အခဲများဖြစ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှ အလုပ်သမားများ ပွဲစားများ၏ ငွေလိမ်ခံရမှုကြောင့် မြဝတီမြို့တွင် သုံးလကြာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခိုးယူသုံးစွဲမှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ စစ်တပ်တို့ စစ်ပြေငြိမ်းရေး နယ်စပ်၌ပထမဆုံး အစည်းအဝေးပြု?
ရခိုင်အရေးကို ရခိုင်များအား ပါဝင်ဖြေရှင်းခွင့် မပေးခြင်းသည် အလွန် ရယ်စရာကောင်းသော ဟာသပြက်